Gịnị Mere M Ga-eji Na-emere Ndị Ọzọ Ihe Ọma? | Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Moore Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Zulu
Ihe abụọ ọtụtụ ndị na-amaghị
Ndị na-emere ndị ọzọ ihe ọma
Olee otú m nwere ike isi meere ndị ọzọ ihe ọma?
Nke #1: Ị na-emere ndị ọzọ ihe ọma, hanwa ga na-emekwara gị ihe ọma.
Ndị mmadụ hụ na ị na-enye ndị ọzọ ihe, ha ga na-enyekwa gị ihe. Baịbụl kwuru, sị:
“Na-enyenụ ihe, ndị mmadụ ga-enyekwa unu ihe. . . . Ihe unu ji atụ̀ ihe ka ha ga-eji tụọrọ unu ihe.”​—Luk 6:​38.
Nke #2: Ị na-emere ndị ọzọ ihe ọma, ị na-emekwara onwe gị ihe ọma ma.
Inye ndị ọzọ ihe ga-eme ka ị mara na ị bara uru, meekwa ka i nwee obi ụtọ mmadụ na-enwe ma o nye ndị ọzọ ihe. Lee otú Baịbụl sị kwuo ya:
“A na-enweta obi ụtọ ka ukwuu n’inye ihe karịa ka a na-enweta n’ịnara ihe.”​—Ọrụ Ndịozi 20:35.
“Mgbe ị na-akpọ oriri, kpọọ ndị ogbenye, ndị nwere nkwarụ, ndị ngwọrọ, ndị ìsì; ị ga-enwekwa obi ụtọ, n’ihi na ha enweghị ihe ọ bụla ha ga-eji kwụọ gị ụgwọ.”​—Luk 14:13, 14.
O nweghị ebe a na-enweghị ndị na-eto eto na-emere ndị ọzọ ihe ọma. Lee ụfọdụ n’ime ha.
“Mgbe ụfọdụ, m bịa ka m nọrọ ọdụ lee tiivi, mụ echeta mama m na papa m gara ọrụ, chetakwa na ike ga-agwụcha ha ma ha lọta. N’ihi ya, m na-ebili gaa saa efere ma zaa ụlọ. M na-emekwara ha kọfị n’ihi na ọ bụ ihe na-amasị ha. Mama m lọta, ọ na-asị, ‘Ime ụlọ a mara mma, ọ na-esikwa ísì ọma. Nwa m, i meela nnụ?’ Imere papa m na mama m ụdị ihe a na-eme m obi ụtọ.”​—Casey.
“Papa m na mama m na-egboro m mkpa m niile. N’ihi ya, mgbe nnukwu ihe mebiri n’ụgbọala ha n’afọ gara aga, m nyere ha akwụkwọ ha ga-eji dọrọ ego mezie ya, n’agbanyeghị na o mere ka obere ego fọdụziere m. Ọ bụ eziokwu na ha ekweghị anara m ego ahụ, ma m rịọsiri ha ike ka ha were ya. O nweghị ihe ihe ahụ m meere ha bụ ma e jiri ya tụnyere ihe ha meerela m. Obi tọrọ m ezigbo ụtọ na m nyere nne na nna m ihe.”​—Holly.
Ị̀ maara? Ọtụtụ Ndịàmà Jehova na-eto eto na-enwe obi ụtọ n’ihi na ha na-enyere ndị ọzọ aka ịmụta ihe dị na Baịbụl. Ụfọdụ n’ime ha akwagadịla ná mba ọzọ n’ihi na e nwechaghị ndị na-akụzi Baịbụl ná mba ahụ.
“Esi m Amerịka kwaga Meksiko ka m nye aka na-akụziri ndị mmadụ Baịbụl n’ebe ahụ. Mgbe ụfọdụ, anaghị m enwe ego ma ọ bụ ihe ọzọ m ga-enye ndị ọzọ n’ihi na o nweghị otú ọ dịịrị m. Ma, achọpụtala m na m jiri ike m na oge m gaa ozi ọma, ndị m ziri ozi ọma na-enwe ezigbo obi ụtọ karịadị otú ha gaara enwe ma a sị na m nyere ha ego ma ọ bụ ihe ndị ọzọ.”​—Evan.
Ị̀ ga-achọ inwe obi ụtọ mmadụ na-enwe ma o meere ndị ọzọ ihe ọma? Lee ihe ụfọdụ ị ga-eme.
Iji nyere ndị ezinụlọ unu aka:
Saa efere, zaa ụlọ, ma ọ bụkwanụ gị ehichaa ụlọ n’echeghị ka a gwa gị ya agwa
Kelee papa gị na mama gị maka ihe ọma ndị ha na-emere gị ma ọ bụ gị edee ya na kaadị nye ha
Nyere nwanne gị aka ka o mee ihe onye nkụzi ha sịrị ya mee
Iji nyere ndị na-abụghị ndị ezinụlọ unu aka:
Gaa leta onye ahụ́ na-adịghị
Gaa na nke onye agbata obi unu merela agadi meere ya ihe ụfọdụ
Gaa leta onye na-anaghịzi apụta èzí
Zụta onyinye ị ga-enye onye ihe na-esiri ike ma nye ya ya
Ihe ga-enyere gị aka: E wezụga ihe ndị a e dere ebe a, gbalịa cheta n’onwe gị ụzọ ndị ọzọ i nwere ike isi meere mmadụ ihe ọma. Gbalịakwa meere mmadụ ihe ọma n’izu a. O nwere ike ịtụ gị n’anya otú obi ga-esi tọọ gị ụtọ.
“I nyere ndị ọzọ aka, obi ga-adị gị ụtọ. Afọ ga-ejukwa gị. O nwedịrị ike ịbụ na ihe ahụ i meere ndị ọzọ tọrọ gị ụtọ mgbe ị na-eme ya, n’agbanyeghị na ị maghị na ọ ga-atọ gị ụtọ ná mmalite. O nwekwara ike ịbụ na ọ dịghị gị ka ihe ahụ i mere ò furu gị ihe, ebe ọ bụ na ọ bakwaara gịnwa ezigbo uru.”​—Alana.
Ndị Ntorobịa—Gịnị Ka Unu Ga-eji Ndụ Unu Mee?
Ị̀ chọrọ ibi ndụ ga-abara gị uru? Lee vidio a ka ị hụ ihe Cameron kọrọ gbasara otú o si bie ndụ bara uru n’obodo ọzọ.